I-China New Wallet Short Ladies Zipper Wallet Korea Splicing Tassel Coin Purse Card Firmer Holder Firm kunye Umboneleli | Sansan
Amanqindi amatsha e-Wallet ama-Zipper Wallet yaseKorea yokuSusa iiMali zoQiniso lwePasile yeKhadi
Le wallet yenzelwe kakuhle yenziwe ngezinto ze-PU ezisempilweni kunye nezingqongileyo. Imalunga ne-intshi ezi-4,7 ii-intshi ezi-3.5 ii-intshi ezi-0,5 i-intshi (malunga ne-12 cm x 9 cm x 1.8 cm) kwaye inobunzima be-90 gr.
Into Hayi. ywssd-034
Indlela yokuvula I-zipper bopha
Uyilo lwangaphakathi lwengxowa encinci indawo yemifanekiso, igridi ye-zipper, iklip yevidiyo, isikhundla sekhadi, igridi efihliweyo, utshintsho lwesikhundla
Imilo yebhegi icandelo lendawo ethe nkqo
Ubunzima bemveliso I-0.09kg
Ubungakanani bemveliso 12 * 9 * 1.8cm
Uyilo lwenoveli, imbonakalo yokuhombisa esimexayo, ukusetyenziswa komtya wesikhumba ophezulu, ukuhanjwa okucocekileyo kunye nokucocekileyo, kukuzisela ubutsha kunye nemozulu entle. Yenziwe ngeendawo ezi-5 zokugcina amakhadi asebhanki, indawo eyi-1 enkulu yokugcina oovimba, kunye nendawo eyi-1 yokugcina imifanekiso enefestile ebonakalayo ebonakalayo, apho ungabeka khona iifoto zabathandekayo bakho, uhambe nefudumele mihla le. Ingxowa-mali yengqekembe eyi-1 kunye ne-zipper, ukugcinwa okukhuselekileyo kokutshintsha kunye nezinto ezincinci. Sisebenzisa iibhutsi zensimbi ekumgangatho ophezulu, zigudileyo kwaye azisiyogwala, zomelele. Intloko ye-zipper esemgangathweni ophezulu kunye ne-zipper yensimbi, egudileyo kwaye ayiJamani, mhle kwaye uluncedo. Uyilo lweekhomputha ezininzi zenza ukuba ukugcinwa kwezinto kungasasebenzi.
Sisoloko sisebenzela iimveliso ezigqibeleleyo, silawula ngokungqongqo zonke iinkcukacha zokuqhubekeka, izixhobo ezikumgangatho ophezulu, uyilo olucingelwayo kunye nobuchule bobuchule bokuqala ukuzisa amava emveliso aphuculweyo.
Edlulileyo: Inenekazi elitsha elineWallet emfushane yaseKorea iZipper zemiThombo emi-2 Fold Wallet
Okulandelayo: Ngama-2020 amanenekazi amancinci iwallet yabasetyhini ababhinqileyo
Amanxeba wallet enkulu uhlobo iqokobhe uhlobo 2020 ne ...
Iplagi entsha evakalayo ye-anti-eyebiwe ...
Imodeli elula yamanenekazi amancinci amancinci amancinci ...
Imfashini eNtsha yamaWallet amade aVulekile ...